လေလှိုင်းထဲက ကချင်တိုက်ပွဲ | ဧရာဝတီ
လဖိုင်| January 31, 2013 | Hits:9,094
လိုင်ဇာ FM ရဲ့ ဧရိယာဟာ လိုင်ဇာ၊ ၀ိုင်းမော်၊ ဗန်းမော်၊ မြစ်ကြီးနား၊ ဖားကန့် အထိ ရောက်ပြီး စစ်သတင်းကို အဓိကထား လွှင့်ပါတယ်။ စစ်သတင်းပြီးနောက်မှာတော့ နိုင်ငံတကာသတင်း၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ သဘော ထား ကြေညာချက်တွေကို အသံလွှင့်ဖတ်ပြပါတယ်။ တနေ့ကို အပိုင်း ၂ ပိုင်းနဲ့ လေလှိုင်းလွှင့်ချိန် စုစုပေါင်း ၁၁ နာရီ ရှိပါတယ်။
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> AunG January 31, 2013 - 10:06 am	We support Kachin , we demand Peace for Federal Government , we hate pro-burma army…
Reply	Linyone January 31, 2013 - 11:26 am	Dirty indeed. The people want to see who has better idea for democratic Union. KIO? Or Myanmarese quasi-civilian junta? Instead of using dirty attack, both side try to have better input for the future. So far, KIO’s position is better to build democratic Union of Burma.
Reply	pps၁၂၃၄၅ January 31, 2013 - 1:35 pm	ပင်လုံစာချုပ် ကို လက်မှတ် ထိုးခဲ့တဲ့ ဦးအောင်ဆန်းက လည်း ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး သဘောကောင်းသူ တစ်ယေက်ပါ။
တိုင်းရင်းသားတွေ အပေါ် သဘောကောင်းသူ တစ်ယောက်ပါ။
ဗမာပြည်မှာ ဦးအောင်ဆန်းကို ကြည်ညိုတဲ့ ဗမာလူမျိူး တွေ အများကြီး ရှိသေးပါတယ်။
ဦးအောင်ဆန်းက တိုင်းရင်းသားတွေ အပေါ် မည်သည့် အခါတွင် မှ သောင်းကျန်းသူ ဆိုသော အသုံးအနှုန်း ကို မသုံးသွားခဲ့ပါကြောင်း…………………….
Reply	R.zar January 31, 2013 - 2:47 pm	ကျော်ဆန်း ထက် ပိုဆိုးတဲ့ ရဲထွဋ်က ပြန်ကြားရေး ဌာန ကို ဦးဆောင်နေပါသည်။
တိုင်းရင်း သား မကောင်းကြောင်း တော့ ဆက်တိုက်ကြားရပါအုံးမည်။
Reply	myitkyina thar January 31, 2013 - 3:44 pm	I don’t even know Laiza FM and never heared before.Even my family and friends.When can i read true news?God bless me first…sankyu..
Reply	nhkum January 31, 2013 - 6:12 pm	ဒီအစိုးရက တော်တော့်ကို လုပ်နိုင်တာဘဲ။ ဒါပေမယ့် သူဘယ်လောက်လုပ်လုပ် သူများလွင့်တဲ့ လိုင်းကိုမှ လုပြီးလွင့်တယ်ဆိုတော့ ဘယ်သူ မကောင်းပြီး လူဆိုးလုပ်တာလဲ ဆိုတာက အသိသာကြီးပါ။ အေးပေါ့လေ သူလူဆိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလေး ပေးလုပ်လိုက်ကြပါ ။ သူခံရတဲ့ အချိန်ကျတော့မှ ငါတို့ဝိုင်းပြီး ကြည့်ကြတာပေါ့ နောင်လာနောက်သားတွင် မကောင်းမှူဆိုတာ ရလဒ်မကောင်းဘူး ဆိုတာ သင်ခန်းစာရအောင်။
Reply	jhmw February 3, 2013 - 3:26 pm	The pains were well known, the right medicine also in the hands. The big problem here is that the Burmese doctor always insisting in bargaining for his big purpose to take the right action to cure our union. Ni yet nea way nay tar par… ma lar chin loe yu chin yaung saung nay tar par… It is the world biggest misappropriation of the duty.
Reply	Saw Sunnymoon February 5, 2013 - 7:51 pm	The more oppression the more response is the nature. So we never go against nature. If so we will wins to our Goal and Freedom. If not we will lose our Peace.
Now we are in Peace process, also in Wins / Wins strategy. Never, Never, Never let to lose our chances.